Ifulethi elihle le-oceanview loft - I-Airbnb
Ifulethi elihle le-oceanview loft
128 okushiwo abanye
Reykjavik, Capital Region, i-Iceland
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Sissa
U-Sissa Ungumbungazi ovelele
Ukuvuka uzwa umsindo wamagagasi, ulalele umoya ovunguzayo wasebusika, ubuka izinyoni ezindiza ngokukhululekile esibhakabhakeni esise-nordic, ezinombono omangalisayo wolwandle uze ufike lapho ubona khona. Kucishe kufane nokuba semaphandleni kwenye yezindawo ezipholile kakhulu zeReykjavík. Futhi ushintsho olukhulu ukubona izibani zasenyakatho kanye nokushona kwelanga okuhle kusuka kuvulandi.
Ikhaya lami lisendaweni epholile kunazo zonke e-Reykjavík, enezindawo eziningi zokudlela, imnyuziyamu nezitolo zobuciko, futhi cishe imizuzu eyi-10 - 15 kuphela ukusuka enkabeni yedolobha.
Iyagqama, yesimanjemanje futhi ivulekile futhi inombono omuhle wolwandle futhi ungezwa ukuqhuma kwamagagasi efulethini.
Kunekamelo lokulala elikhulu elinombhede wendlovukazi futhi lingena eliseduze elixhuma endlini yangasese. Ungabona ulwandle embhedeni.
Igumbi lokuphumula kanye negumbi lokudlela kuxhumene nombono omuhle phezu kolwandle. Igumbi lokugezela elihle nelihlanzekile futhi futhi ungabona ulwandle lapho ulele okugeza kwakho.
Ikhishi lifakwe konke ongakudinga ukuze uzipheke wena.
umshini wokuwasha izitsha, umshini wekhofi kanye ne-toaster. Eduze kwekhishi kunendawo yokudlela. Kunetafula elikhulu labantu abangu-6. Olunye uhlangothi lwefulethi luyingilazi nje ngakho-ke umbono uyamangaza Kukhona i-balcony ebheke eningizimu enombono omangalisayo, ilanga elibomvu laphakathi kwamabili elingahlali phansi ehlobo, kanti ebusika kuwushintsho olukhulu ukubona izibani zasenyakatho. .
Ifulethi lisesitezi sesibili futhi akukho lutho oluvimbela ukubuka.
- Igumbi lokugezela elinobhavu
- Ukubuka okuhle kolwandle
- I-TV yesikrini esiyisicaba
- Ikhishi elihlonyiswe ngokugcwele, umshini wokugeza izitsha, umshini wekhofi, njll.
- Amathawula nezinsiza zokugezela
- Uzokwazi ukufinyelela kukho konke ongase ukudinge, i-WIFI yamahhala, amathawula ahlanzekile namashidi amasha.
Ifulethi lisendlini enkulu yengilazi engasethekwini laseReykjavik esifundeni sezimboni esigcwele izinto zasendaweni ezithokozisayo njengokubuka imikhomo, iMyuziyamu yamaWhale, ukudoba esikhumulweni semikhumbi, imakethe yezimoto yaseReykjavík kanye nemigoqo nezindawo zokudlela ezishisayo namahhotela. .
Kukhona futhi izitolo ezine-Icelandic fashion design kanye nobuciko.
Umgwaqo wezitolo uLaugavegur uwuhambo lwemizuzu eyi-15 - 20 ukusuka efulethini. Vakashela Incwadi yami Yomhlahlandlela ukuze uthole okunye okusebenzayo kule ndawo.
Ifulethi linakho konke ukunethezeka kwekhaya kuhlanganiswe nendawo enhle" njengoba esinye sezihambeli zethu sakubeka.
"Indawo enhle kakhulu. Ibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya kukho konke okubalulekile ngenkathi use-Reykjavik"
"Sekukonke siyayithanda le ndawo!"
Kunesitobhi sebhasi eduze kwendlu. Kuwuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya enkabeni yedolobha kanye nomgwaqo omkhulu wezitolo waseReykjavik, eLaugavegur.
Izitolo ezi-3 zokudla zikumizuzu emi-5 ngebanga lokuhamba kanti esinye sazo sivula amahora angama-24.
Kukhona nedamu lokubhukuda eliseduze, i-Vesturbæjarlaugin, lapho kunamabhavu ashisayo nama-saunas.
Ifulethi lisendaweni ethule kakhulu, ngakho-ke kuzwakala sengathi usemaphandleni, yize liseduze nenkaba yedolobha.
Kunezindawo eziningi zokudlela kanye nemnyuziyamu ezungeze i-aria.
Ungafika kanjani lapho usuka esikhumulweni sezindiza:
Isikhumulo sezindiza sitholakala imizuzu engama-45 ukusuka enkabeni yedolobha futhi sihlinzekwa kalula futhi njalo ngabakwaFlybys.
Sinokuxhumana okuhle kubavakashi kanye nomhlahlandlela wokuphila kwasebusuku ngoba sisebenze kuleyo ndawo futhi singajabula kakhulu ukusiza nokunikeza izeluleko ezinhle.
Okwamanje kunomsindo wokwakha oqhubekayo ebhilidini ngakho kungase kube nomsindo wokwakha phakathi nosuku.
ubusuku obungu-7 e- Reykjavik
4.89 out of 5 stars from 128 reviews
4.89 · 128 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-128
Ikhaya lami litholakala e- Reykjavik, Capital Region, Iceland.
Ifulethi lisendlini enkulu yengilazi ngasethekwini laseReykjavik esifundeni sezimboni esigcwele izinto zasendaweni ezithokozisayo okufanele zenziwe njengokubukela imikhomo, ukudoba esikhumulweni semikhumbi, i-flee market yaseReykjavik kanye namabha nezindawo zokudlela namahhotela ashisa kakhulu. Kukhona futhi izitolo ezine-Icelandic fashion design kanye nobuciko.
Umgwaqo wezitolo uLaugavegur uwuhambo lwemizuzu eyi-15 - 20 ukusuka efulethini.
Kunezindawo zokudlela ezi-2 kuphela izincwadi ezivela efulethini. Engizikhonzile yilezi: coocoosnest.is bese kuba yi-corse isitolo sika-ayisikhilimu esiseduze noValdís.
I-laprimavera.is iyindawo yokudlela enhle kakhulu kodwa futhi banesidlo sasemini. Ukuhamba kwayo imizuzu eyi-10 ukusuka efulethini futhi kunebanga ngaphezulu kwetheku futhi esakhiweni kukhona ezinye zemibukiso yobuciko.
Nazi ezinye izindawo zokudlela engizithanda i-sumac.is, fiskmarkadurinn.is, grillmarkadurinn.is, rokrestaurant.is.
Ngiyathanda nokuya emachibini okubhukuda futhi engikuthandayo ku-vesturbaejarlaug witch kuthatha imizuzu eyi-15-20 ukusuka endlini. Ngaphesheya kwe-Vesturbæjarsundlaug kune-kaffihusvesturbaejar.is umthakathi indawo yokuphuzela utshwala nendawo yokudlela.
Uma ushayela uya engxenyeni eseningizimu ngincoma ukuthi uye ku-secretalagoon.is endleleni futhi ume ukuze uthole isidlo sasemini e-fridheimar.is. Endleleni eya echwebeni eliyimfihlo ushayela udlula intaba-mlilo yase-Keri futhi kufanelekile ukuma lapho futhi ubuke. Ngemva kokubhukuda echwebeni eliyimfihlo awukho kude neGullfoss neGeysir futhi lezo yizindawo ezinhle kakhulu ongazibona.
I-Blue lagoon ihlale iyindawo ekhethekile ongayivakashela kodwa enye i-obsun i-sky lagoon.
Uma ufuna ukuthatha i-day-drive enhle ngincoma ukuya e-Grindavík futhi ngishayele khona ngiye e-Þorlákshöfn, Stokkseyri , Eyrabakka nase-Selfoss.
I-National park Þingvellir nayo kufanelekile ukuvakashelwa.
Ujoyine ngo-Disemba 2010
Hi my name is Sissa and I am and photographer.
I love music, art, traveling, cooking and having out with good friends.
Ake ungazise uma kukhona engingakusiza ngakho, futhi ngizokwenza konke okusemandleni ami.
USissa Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Reykjavik namaphethelo